मेकअप गर्दै प्रधानमन्त्री ओली, को हुन् ओलीलाई मेकअप गर्ने व्यक्ति ?
काठमाडौं । तस्बिरमा मेकअप गरिरहेका व्यक्ति हुन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका ओली कुनै सुुुटिङ गर्नुपरेको खण्डमा त्यसका लागि आवश्यक हरेक काममा सहजता देखाउँछन् ।
बुझ्नेलाई सजिलो, नबझ्नेलाई कडा, धेरै बुझ्नेलाई व्यंग्यको ‘इनसाइक्लोपेडीया’ प्रधानमन्त्री ओली किन मेकअप गरिरहेका छन् भनेर धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ । ओली ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’का लागि तयार हुन लाग्दाको तस्बिर हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेकअप गर्ने व्यक्ति हुन् विनोद लामा । गएको महिनादेखि सुरु भएको कार्यक्रमको ‘सुटिङ’पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई क्यामेरा र लाइटमा राख्नुअघि मेकअप गरिएको हो ।
‘कार्यक्रममा उहाँको अनुहारलाई अझ तेजिलो, लाइटमैत्री र राम्रो देखाउनका लागि मेकअप गरिन्छ’, कार्यक्रम निर्माण समुहका एकले भने, ‘अन्य कार्यक्रममा पनि यसरी मेकअप गर्ने चलन छ ।’
त्यसो त प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व नै ओली मेकअप, क्यामेराको टेक र अभिनयका लागि प्रख्यात थिए । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव पूर्व तत्कालिन नेकपा एमालेको भिडियो प्रचार सामग्रीका लागि पनि उनले अभिनय गरेका थिए ।
त्यसबेला उनको निवास बालकोटमा पुगेर भिडियो सुटिङ गरेका निर्देशक भानु प्रतापले भने, ‘उहाँ जस्तो सजिलो मान्छे त को होला र ? नेतामा नेता, सहजतामा सहजता । अभिनयका लागि पनि त्यतिकै सहज हुनुहुन्छ ।’
ओलीले त्यसबेला एकाध ‘टेक’ खाए । तर अन्य कलाकार भन्दा सहज हिसाबले भिडियोमा उनको अभिनय देखियो । त्यसबेला पनि उनलाई सिंगारेर उतारिएको थियो ।